> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ Photos si Nexus 4
Tinyere ntọhapụ nke ndị Nexus 5, Nexus 4 nwe a na-eche nnọọ ogologo oge maka gam akporo 4.4 KitKat update maka Nexus 4 ngwaọrụ. N'ikpeazụ, ọ na-abịa, n'ihu nke ọzọ na gam akporo ngwaọrụ gụnyere Nexus 7, Nexus 10 na Galaxy Cheta 3, wdg N'agbanyeghị nke Android version na ị na arụnyere na gị na Nexus 4, Echetara-akwado ihe data mgbe nile. Nke ahụ bụ ihe dị mkpa, karịsịa mgbe ị na-efu dị mkpa data. Mgbe ahụ ihe banyere inwe ehichapụ foto na Nexus 4? E nwere otu ụzọ na-i si a nsogbu. Ọzọ, isiokwu a bụ ihe na-ekwu banyere otú naghachi ehichapụ foto site na a Nexus 4.
Download a Nexus 4 foto mgbake usoro ihe omume free
Tupu eme ihe ọ bụla ọzọ, ị mkpa nwere Nexus 4 foto mgbake software: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery). Nke a na usoro-enye gị ohere kpọmkwem ike iṅomi ehichapụ foto gị Nexus 4 na-agbake ha na otu Pịa. Ihe bụ ihe ọzọ, i nwere ike ihuchalu niile foto tupu mgbake. Ị nwere ike ibudata a ikpe version ya n'okpuru maka free inwe a-agbalị.
Cheta na: E wezụga photos, ị nwekwara ike iji nke a software naghachi videos, kọntaktị, ozi, music na akwụkwọ si nza nke Android ntị na mbadamba (ele ndepụta nke na-akwado na ngwaọrụ na Android ebe a).
Naghachi ehichapụ foto na Nexus 4 na 2 nzọụkwụ
Tupu mgbake: Kwado USB debugging na gị Nexus 4
Ọ bụrụ na ị nyeere USB debugging na gị Nexus 4 tupu, ị nwere ike ozugbo amalite mgbake dị ka nzọụkwụ n'okpuru. Ọ bụrụ na, ị chọrọ ka ya ugbu a. Ọ bụ nnọọ mfe. Gaa Ntọala <Banyere ekwentị <Kpatụ Mee nọmba ruo ọtụtụ ugboro ruo mgbe na-a dee Ị bụ n'okpuru Mmepụta mod <Back to Ntọala <Mmepụta nhọrọ <Lelee USB debugging. Ị nwekwara ike ịlele Android version na gị Nexus 4 n'ụzọ dị otú a ma ọ bụrụ na ị na-amaghị ya.
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị software na-amalite ịgụ isiokwu gị Nexus 4
Mgbe nbudata na na na wụnye usoro ihe omume, na-agba ya na kọmputa gị. Mgbe ina-gị Nexus 4 ejikọrọ. Mgbe ihe omume ahụ na-achọpụta rụọ ngwaọrụ gị, ọ ga-ọnọde gị window dị ka ndị a. Pịa Malite na-amalite ịgụ isiokwu gị Nexus 4 n'ihi na ehichapụ photos na ya.
Nzọụkwụ 2. Preview na-agbake foto gị Nexus 4
N'oge Doppler, ị nwere ike na-amalite Michael hụrụ photos ke Udi memu. Lelee niile foto na Doppler N'ihi na họrọ onye ị chọrọ. Azọpụta ha ka gị na kọmputa site na ịpị Naghachi.
Cheta na: Ọ bụghị nanị na Nexus 4, Wondershare Dr.Fone for Android na-arụ ọrụ dị ukwuu maka ndị ọzọ Android ngwaọrụ site na Samsung, HTC, LG, Motorola, wdg Ị nwere ike na-ele ndepụta nke na-akwado ngwaọrụ ebe a.
Download ikpe mbipute n'okpuru maka free inwe a na-agbalị ugbu a.